बाबुराम भेटेलगत्तै प्रचण्डले भेटे देउवालाई, के कुरा भयो ? « रिपोर्टर्स नेपाल
बाबुराम भेटेलगत्तै प्रचण्डले भेटे देउवालाई, के कुरा भयो ?
प्रकाशित मिति : 2021 March 30, 5:34 pm
काठमाडौं, १७ चैत्र । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग आज छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले सुरुमा बाबुरामसँग भेटेका थिए । त्यसलगत्तै उनी कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए ।
पछिल्लो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा जुटेका दाहालले प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँगको भेटवार्तालाई बढाएका हुन् । देउवा र भट्टराईसँगको भेटमा उनले नयाँ सरकार निर्माणबारे कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे उनीहरुबीच छलफल भैरहेको छ । तर, देउवाले तीन दलबीच नै यसबारेमा लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
बाग्मती र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेर्न माधव नेपालको प्रस्ताव, गठबन्धनको बैठक बस्दै
काठमाडौं, १७ असार । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमा बाग्मती र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नेगरि